ချာ့ Pay ကိုအိမ်ခြံမြေအခွန်ပါသလား
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် & ဘာသာတရား
အမေရိကားရဲ့အခွန်ဥပဒေများထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသိုင်းအဝုိင်းအကြိုးခံစားသောယူဆချက်အပေါ် non-profit နှင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများမျက်နှာသာဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအသုံးပြုတဲ့အဆောက်အဦးများ, ဥပမာ, အိမ်ခြံမြေအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ကြက်ခြေနီနဲ့တူမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလှူငွေအခွန်နှုတ်ယူပြီးသားဖြစ်ကြ၏။ ဆေးဘက်သို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအဖွဲ့အစည်းများအဆင်သင့်အခွန်ဥပဒေများ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အသင်းတော်များ, သို့သော်မရရှိနိုင်ပါကနေအများဆုံးအကျိုးခံစားရဖို့လေ့နှင့် Non-ဘာသာရေးအုပ်စုများကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလျှောက်လွှာနှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်သော်လည်းသူတို့က, အလိုအလျှောက်သူတို့ထဲကအတော်များများများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကွောငျ့တစျအရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ non-ဘာသာရေးအုပ်စုများလည်းသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံသွားဘယ်မှာပိုမိုတာဝန်ခံဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ အသင်းတော်များ, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်အကြားဖြစ်နိုင်သည်အလွန်အကျွံငွိကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်ကြေညာချက်များတင်ပြရန်မလိုပါ။
အခွန်လွတ်လှူဒါန်းခြင်း, အခွန်လွတ်မြေယာနှင့်အခွန်လွတ်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ: ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အခွန်အကြိုးကြေးဇူးမြားသုံးယေဘုယျအမျိုးအစားသို့ကျလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုခွင့်ပြုဆန့်ကျင်ငြင်းခုံအများကြီးအားနည်းဖြစ်ကြသည်။ ။
အခွန်-အခမဲ့လှူဒါန်းမှုများ: ရုံမျှ non-profit အဖွဲ့အစည်းကသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုစေခြင်းငှါအခွန်လွတ်အလှူငွေနဲ့တူအသင်းတော်များ function ကိုမှလှူဒါန်းမှုများ။
မည်သို့ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလှူဒါန်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခွန်တွက်ချက်မီ၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေကနေနုတ်ထားပါသည်။ ဤသည်ယူဆရအစိုးရကယခုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးသောအသိုင်းအဝုိင်းမှအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောအုပ်စုများမှထောကျပံ့ဖို့ပိုပေးရလူတွေကိုအားပေးလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်-အခမဲ့မြေယာ: အိမ်ခြံမြေအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်သည်အသင်းတော်တို့အားတစ်ဦးပင်ပိုကြီးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကိုယ်စားပြု - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိသမျှသောဘာသာရေးအုပ်စုများကပိုင်ဆိုင်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးအားအလွယ်တကူသောင်းချီဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏သို့ပြေး။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အခွန်ထမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအသင်းတော်များမှပိုက်ဆံသိသိသာသာဆုကြေးဇူးကိုမှစောဒနာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအချို့အရသိရသည်ပြဿနာတစ်ခုဖန်တီး။ အစိုးရကဘုရားကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်စုဆောင်းမရနိုငျသောဒေါ်လာစျေးသည်နိုင်ငံသားများကနေစုဆောင်းနေဖြင့်တက်သည်ကိုလုပ်ရမည်, အကျိုးဆက်အဖြစ်, အားလုံးနိုင်ငံသားများပင်သူတို့အားသူတို့ပိုင်ကြဘူးများနှင့်ပင်ဆန့်ကျင်စေခြင်းငှါ, သွယ်ဝိုက်အသင်းတော်များကူညီပံ့ပိုးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်များ၏ခွဲခြာ၏ဤသွယ်ဝိုက်ချိုးဖောက်မှုဘာသာတရား၏လွတ်လပ်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအလွန်တိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ အခွန်ဖို့ပါဝါ, ရေရှည်မှာအတွက်ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်ပင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ပါဝါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏အခွန်ကောက်ခံမှုအစိုးရကရုဏာတော်မှာပိုပြီးတိုက်ရိုက်အသင်းတော်များထားလိမ့်မယ်။
အခွန်ပေးဖို့ပြည်နယ်၏တန်ခိုးမှဘုရားကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်, ဘုရားကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းတိုက်ရိုက်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ပြည်နယ်၏တန်ခိုးမှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦး ရန်လိုအစိုးရ ကပိုပြီးခက်ခဲတစ်ခုလူကြိုက်သို့မဟုတ်လူနည်းစုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ရန်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ဘာသာရေးအုပ်စုတစ်စု ။
အသေးစားဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတခါတရံအသစ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဘာသာရေးအုပ်စုများဆီသို့ဦးတည်သည်းခံစိတ်ဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အတူမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှတ်တမ်းများရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောအုပ်စုများအပေါ်ပိုပြီးပါဝါပေးခြင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုအဘယ်သူအားမျှအိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ နိုင်ငံသားများသွယ်ဝိုက်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများကူညီပံ့ပိုးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပေမယ့်အချို့သောအုပ်စုများပြဿနာဘာသာရေးမျက်နှာကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့, အခြားသူများထက်အများကြီးပိုအကြိုးရှိနေကြသည်သာ။ ကက်သလစ်နှင့်, အယေဟောဝါသက်သေများနှင့်တူအခြားသူများအား, အများကြီးလျော့နည်းတာကိုပိုင်ဆိုင်သော်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရှိသည်ကဲ့သို့တချို့ကအဖွဲ့အစည်းများ။
လိမ်လည်မှုပြဿနာလည်းရှိပါသည်။ မြင့်မားသောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်ငြီးငွေ့တချို့လူတွေကမေးလ်-ယူမှု "ဘုရား" ဒီပလိုမာများအတွက်လွှတ်ခြင်းနှင့်ယခုသူတို့ဝန်ကြီးများဖြစ်သောကြောင့်, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ်ခြံမြေအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်, ထိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
ထိုပြဿနာကို 1981 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ပြည်နယ်မေးလ်-အလို့ငှာဘာသာရေးကင်းလွတ်ခွင့်တရားမဝင်ဖြစ်ကြေညာမယ့်ဥပဒေကြောင်းအလုံအလောက်ဖြစ်တယ်။
တောင်မှတချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကအိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ယူဂျင်း Carson Blake က, ချာ့အမျိုးသားကောင်စီဟောင်းတစ်ဦးဦးခေါင်း, ထိုတစ်ချိန်ကညည်းညူ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် အနည်းဆုံးကတတ်နိုင်သူဆင်းရဲသားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးချပြီးတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူတဦးတည်းနေ့၌လူများကသူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝအသင်းတော်များနှင့်ဝယ်လိုအားလျော်ဆန့်ကျင်လှည့်အံ့သောငှါကြောက်ရွံ့ကြ၏။
ချမ်းသာကြွယ်ဝအသင်းတော်များသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မစ်ရှင်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါစိတ်ကူးလည်းဂျိမ်းပိုက်, San Francisco မှာဟောင်းတစ်ဦး Episcopal ဘိရှော့နှောင့်အယှက်။ သူ့ကိုအလိုအရအချို့အသင်းတော်များသူတို့ရဲ့အာရုံဖြစ်သင့်သောဝိညာဉျရေးရာခေါ်ဆိုမှုမှသူတို့ကိုမျက်စိကွယ်တာများလွန်းပါဝင်ပတ်သက်ပိုက်ဆံနှင့်အခြားလောကီကိစ္စရပ်များနှင့်အတူဖြစ်လာကြပါပြီ။
Agnosticism & ဘာသာတရား
အဆိုပါ 1957 တရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်: Roth v အမေရိကန်။
အဆိုပါ Matrix, ဘာသာတရားနှင့်ဒဿနိကဗေဒ
Agnostic Theism ကဘာလဲ?
ကိုယ်ပွားသမိုင်း၏ Timeline ကို
ဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်များ၏ Separation အကြောင်းဒဏ္ဍာရီ
သုံးဘာသာတရား, တစျခုသညျဘုရားသခငျ? ဂျူးဘာသာ, Chrisianity နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာ
မူလတန်းကျောင်းသားများအဘို့ 10 စာဖတ်ခြင်းမဟာဗျူဟာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ
Homer ၏ Iliad အတွက် Troy ၏ဟယ်လင်
Diwali (Deepavali) 2022 မှ 2018 အဘို့စတငျရ
အဆင့် retention ကိုရည်မှတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမေးခွန်းများ
အဆိုပါ Super Bowl ဂိမ်းဟာ Off ခေါင်မိုး Keeping
ငွေလုံးကောက်ကောင်းကင်မှကျသောအခါရှားပါး Times သတင်းစာများ၏လေ့လာပါ
တစ်ဦး GM ကစက်နှိုး Module အစားထိုးလုပ်နည်း
အမျိုးအစားများနဲ့ DNA မျိုးဗီဇသင်္၏ဥပမာများ
ဒုက္ခသည်များအကြောင်း Batman နှင့် Superman ရဲ့သမိုင်း Views စာကဘာလဲသလော
"စတော်ဘယ်ရီလျင်မြန်စွာ" meth ရုံတစ်ခုမြို့ပြဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ
'' ကျွန်မရဲ့မိသားစု Crazy Is? ' မိသားစုအကြောင်းရယ်စရာ Thoughts
V-2 ဒုံးပျံ - Wernher Von Braun
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်နှောင့်နှေးကျအောကျခံအဘယ်အရာဖြစ်ပါသလား